MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LABRADINGER IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Labradinger iyo Sawirro
Ingiriisiga Xilliga Gu'ga ee Isbaanishka / Labrador eeyaha Isku-dhafan ee Isku-dhafan
Xaaskaaga labradinger-buuxa ah ''Wister = 50% shaybaar madow (aabe) / 50% spaniel guga ingiriisiga (hooyo). Eyga ugu fiican ee aan abid hantiyo xayawaanka aan jeclahay oo dhan! Wister waa mid jilicsan, caqli badan, kalgacal leh oo aad u firfircoon. Isagu waa u janjeedha dadka, oo leh ruux badan (iyo majaajiliiste)! '
Labradinger-ku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Ingiriisi Springer Spaniel iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Labradinger
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeyaha = Labradinger Retriever
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naqshadeeyaha = Labradinger Retriever
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Labradinger
'Axel waa Labradingerkeyga halkaan lagu muujiyo isagoo ah eey 4 bilood jir ah. Aad buu u caqli badan yahay. Wuxuu jecel yahay inuu dib u soo cesho oo uu aad u jecel yahay. '
'Ellie, Lix-jirteyda' Springador '(doorashada UK) ama Labradinger (xulashada Mareykanka) waxay ku dhex jirtaa qalabkeeda' ka shaqeynta 'hal sawir iyada oo ila shaqeyneysa sida Eyga Baarista Dabka waxaan raadineynaa goobaha dabka si aan u ogaano sababta keentay dab. Haddii qof isticmaalay dareere ololi kara (sida baatroolka) si uu u bilaabo dabka Ellie ayaa i tusi doonta meesha ay taalo. '
Ku shubo Labradinger-ka 2 sano jir ah— 'Fluke waa tamar buuxda wuxuuna leeyahay dabeecad aad u jilicsan. Waxay jeceshahay cayrsashada wax kasta oo dhaqaaqa, oo ku dhuumaalaysta caws dheer oo ay saaxiibadeed kula ciyaaraan xanaanada eyga
Murphy the Labradinger puppy at 3 bilood jir (Ingiriis Springer Spaniel / Labrador Isku dhafka Retriever)
Jacca Labradinger eey yar oo ah 12 toddobaad (Ingiriis Springer Spaniel / Labrador Retriever mix) oo ku calalinaya gabal qoryo ah
Jacca Labradinger eey yar oo ah 12 toddobaad (Ingiriis Springer Spaniel / Labrador Retriever mix) - '' Jacca wuxuu ku sugnaa xeebta halkaas oo runtii ay ka jirtay dabayl xoog badan taas oo dhagihiisa u kala bixisay dhinac walba (ogow iscasilaadiisa! Wuxuu neceb yahay dabaysha iyo roobka!)
Princess the shukulaatada labrador / Jiilaal Isbaanish ah qas (Labradinger) eey yar oo 3 bilood jir ah— Walaalaheed waxay umuuqdeen sidii shaybaarrada shukulaatada. Midbaa bar cad ku lahaa laabta. Midkale wuxuu ahaa midab madow / madow oo leh calaamado bunni ah wajigeeda. Our 'Princess' wuxuu ahaa midka kaliya ee la arkay. Hooyadeed waxay ahayd Springer Spaniel iyada oo kaliya waxay laheyd aag yar oo dhibco ah waxayna u badneyd madow. Illaa iyo hadda, Princess waxay leedahay shaqsiyad weyn waana deggan tahay laakiin dheel badan gaar ahaan subaxdii. Waxay isku baratay inay alaab ka soo qaado 2 at bilood. Waxay jeceshahay inay wax ku calaasho. Waxay kaloo leedahay hal il oo midab bunni ah iyo mid isha buluug ah . '
Princess the shukulaatada labrador / Jiilaal Isbaanish ah qas (Labradinger) eey yar oo jira 3 bilood
Princess the Shukulaatada Shukulaatada / Jiilaal Isbaanish ah qas (Labradinger) eey yar oo jira 3 bilood
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Labradinger
Sawirada Labradinger Bogga 1
Sawirada Labradinger Bogga 2
caddaan iyo buugaagta loo yaqaan 'cocker spaniel'
1 jir dane weyn
lhasa apso oo lagu qasay poodle
eygu wuxuu dhalaa 40 rodol iyo ka yar
Dahab dahab ah nova scotia duck tolling mix